Yusuf Garaad: Ka hor Shilka Madaxweynaha
Xarunta JUS iyo Rugta Gahayr
Dhowaan waxaan qoray saameynta ii muuqatay ee Shilkii Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ee 1986. Mar waxaan soo xigtay Madaxweynaha oo Golaha Wasiirrada uga warbixinaya xaaladdiisa caafimaad. Marna aniga ayaa u fiirsaday oo hoos u dhac ka dareemay nidaamka kala dambeynta Madaxda Sare ee dalka.
Waxaan maanta soo bandhigayaa hal dhacdo oo yar oo aan goobjoog u ahaa oo ka horreysay shilka.
Laba weriye oo Radio Muqdisho u xil saaray in ay booqashada ka warramaan ayaan midkood ahay. Weriye Cabdulqaadir Cali Iidle waxaa uu qaabbilsanaa Kismaayo Aniguna Hargeysa. Wejiga safarka ee Muqdisho wadajir ayaan uga shaqeyneynay.
Xarunta Maanta la booqanayo waa Xarunta Kulliyadaha Gahayr. Waxaa deggan toddoba Kulliyadood Kulliyadda Qaanuunka oo ay arday ka yihiin Madaxda uga badan ee Jaamacadda dhigta sida Saraakiil Ciidan, Xildhibaanno Baarlamaanka ah, Duqa Magaalada Muqdisho, Agaasimeyaal Guud iyo Madax kale oo badan. Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Kulliyadda Afafka. Kulliyadda Xannaanada iyo Daawawada Xoolaha, Kulliyadda Injineeriya oo ay saraakiil badan oo militeriga ahi ay dhigtaan, Kulliyadda Jiyoolajiya iyo Kulliyadda Kiimiko.
Waxaa kale oo Xarunta Gahayr deggan Madaxda iyo Maamulka Jaamacadda.
Isu-geyn Kulliyadaha Gahayr waa kuwa soo saaray Ra'iisal Wasaarayaal ay ka mid yihiin Cali Geeddi, Nuur Xasan Xuseen, Cabdiweli Gaas, Saacid Faarax Shirdoon, Cabdiweli Shiikh iyo Cumar Cabdirashiid.
Dhismaha Gahayr waa afar qeybood. Laba waa degaanka ardeyda, midi waa Kuliyadda Saxaafadda iyo Siyaasadda midda kalena waa toddobada Kulliyadood iyo Xarunta Maamulka Jaamacadda.
Siyaad, Craxi iyo Madaxdii la socotay ayaa baabuurta ka soo degay. Jaamacaddu waa mid ka mid ah mashaariicda madaxweynuhu jecel yahay kuna faano. Wuxuu isu diyaarinayaa in uu Craxi tuso waxa Soomaali u qabsoomay inkasta oo lacag Yurub iyo mid Talyaaniba ay qeyb ka yihiin mashruucan.
Dhowr iyo soddon weriye oo ajnebi ah ayaa socda. Xagga Soomaalida waxaan nahay qiyaastii dhowr iyo toban Astaanta Press sita laakiin ma wada nihin weriyayaal.
Aan soo koobee, maaddaama aan ahaa arday Jaamacadda dhigta, maalmo fara ku tiris ah ka dib ayaa aniga oo kaligeey lugeynaya bartii uu Madaxweynuhu ka noqday ayaan arkay jawaabta su'aashiisii. Waxaan arkay iyada oo la jebiyay derbigii Madaxweynaha xannibay ee uu ka laabtay. Irid aad u weyn oo dhismaha laga galo ayaa laga sameeyay bartii uu Madaxweynuhu moodayay albaabka ee damcay in uu daarta ka galo.